Rano Tianeptine hemisulfate monohydrate poids (1224690-84-9) - Phcoker
SKU: 1224690-84-9 Sokajy: Weight Loss
Rano Tianptine roahin-kisoa (1224690-84-9) mena
Rano Tianptine roahin-gômaidinina monohydrate (1224690-84-9)
Product Name Rano Tianeptine roahin-jiro monohydrate
Anarana simika Tihinulfate miteraka hemisulfate; 1224690-84-9; Heptanoic acid,
Drug Class Sokajy
molekiolan'ny Formula C42H56Cl2N4O14S3
molekiolan'ny Wvalo 1008.004 g / mol
mitsonika Point 1800 ℃
mangotraka Point 269.8 ° C amin'ny 760 mmHg
Solubility Vetivety tsy misy rano sy metanol ary dichloromethane
Storage Temperature Kilaoty maina
Application Ny sodium Tianeptine dia azo ampiasaina amin'ny fifandraisana tricyclique amin'ny psychostimulant
Ny natiora Tianeptine dia manana fifehezan-tena sy fihanaky ny homamiadana. Antidepressant
Rano Tianptina roahin-tavy (THM) hemisulfate (1224690-84-9)
Ny Tianeptine roahin-kainhyhyulfate monohydrate roapolo, izay antsoina koa hoeTianeptine Sulphate, dia ny dikan-tsarin'ny tiana siraptine sira. Tsy mora ny mihazakazaka, mora kokoa ny miatrika, mora kokoa ny mandeha ary maharitra indroa. Manana tombontsoa mitovy amin'ny Tianeptine Sodium izy io, fa ny sulfate ihany no manana ny antsasaky ny 5-6 ora, noho izany dia maharitra indroa raha mbola misy ny sodium tianeptine. Noho izany, ny mpikaroka dia mila 2-3 indray ny habetsaky ny solventa mba hahatratrarana ny vokatra tadiavina izay nahatonga azy ireo ho tia amin'ny sodium. Sulfate koa dia tsy dia misy dikany amin'ny tsirony sy ny fahitana.
Ny hormone monoxide Tianeptine dia sokajiana ho toy ny seliteran'ny serotonine (enhancement) ny fihenan-tsakafo (SSRE) ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana. Tianeptine dia novolavola tany Frantsa tamin'ny 1960 ary nampiasaina nandritra ny tapany farany amin'ny 2000s.
Indraindray dia ampiasaina mba hanehoana ny aretin'ny tsinain'ny tsinay na ny asmaty. Amin'ny danjam-pahavoazana dia voalaza fa mamokatra ny vokatra ara-tsakafo opioid toy ny fitsaboana sy ny fanentanana, ny fampivoarana ny famporisihina, ary ny hafanana rehefa voatantana.
Tiumptine hemisulfate monohydrate (THM) poids (1224690-84-9) Mechanism of Action
Ny iray amin'ireo fomba fiasa voalohany amin'ny hormone hydraphate Tianeptine dia ny hampitombo ny fihinanana serotonine (5-HT) ao amin'ny atidoha sy amin'ny platelets. Tsy toy ny ankamaroan'ny akora tricyclic, ny Tianeptine dia tsy mifandray amin'ny fihenan'ny fahombiazan'ny mognitation na ny fiasan'ny motera. Toa manana ny asany amin'ny rafitra glutamaterika, izay heverina ho toy ny rafitra mpanohitra manasitrana.
Amin'ny fampitomboana ny fikorontanan'ny serotonine, ny monhydratin'ny Tianeptine hemisulfate dia manana rafitra mifanohitra amin'ny SSRI nentim-paharazana. Ny fandinihana vao haingana dia nandinika ny vokatry ny Tianeptine eo anelanelan'ny fitrandrahana neuroplasticity ny fahaketrahana, izay mety hisy ny asany. Ny fikarohana vao haingana ihany koa dia mampiseho fa mety mifandray amin'ny receptors adenosine ny Tianeptine.
Ankoatra izay, ny fikarohana vao haingana navoaka tao amin'ny 2014 dia manoro hevitra fa ny Tianeptine dia mety ho mpanafika m -opioid (MOR). Ny mpikaroka dia nampiasa ny fanandramana mifandraika amin'ny radioligand sy ny sela mba hamantarana ny Tianeptine ho maritiora MOR. Izy io ihany koa dia agonista feno d-opioid saingy miaraka amin'ny firaisana ambany kokoa. Tsy nahitana fahombiazana tamin'ny tranonkala k-opioid ny Tianeptine.
Use ny Tiumptine hemisulfate monohydrate (THM) poids (1224690-84-9)
▪ Loza manelingelina
▪ Manohitra ny tebiteby sy ny mpanohitra ary ny toetra tsy misy fitiavan-tena
▪ Fahombiazana amin'ny fahaiza-manao sy fahaiza-mampianatra
▪ Ny fanaintainan'ny areti-mifindra
Tumeptine monohydrate (THM) hemisulfate (XMUMX-1224690-84) Dosage Recommended
Ny dihydulfate amin'ny tifiofa ipetulfat dia matetika dia 25 mg indray, na indroa isan'andro. Na dia manomboka amin'ny dosage ambany aza izy, dia mety ny mamaritra azy amin'ny 2 na 3 andro isan-kerinandro, fara fahakeliny 3 - 4 andro anelanelany.
Ny monohydrate hemisulfate hemisulfate dia tonga ao anaty kapsily na vovo-poana. Manolo-kevitra ny hanomboka amin'ny dosia ambany sy ny fitomboan'ny vola madinika mandra-pahatongan'ny dosia marina. Ankoatr'izany, kely kokoa ny dosage hampihenana ny mety ho fiankinan-doha, fanesorana mavesatra, ary fandeferana.
Dosina amin'ny 50 - 75 mg dia mety handrisika. Ny Tiumptine hemisulfate monohydrate ny doka fialam-boly> 100 mg dia mety hahatonga ny hemisulfate Tianeptine tsy miteraka fahatsapana ambony.
Ny tombontsoa avy amin'ny poezia monohydrate (TEM) Tianeptine (THM) (1224690-84-9)
• Manatsara ny tsy fahasalaman'ny atidoha sy ny fahaketrahana ny fahaketrahana ny monohydrate miteraka Tianeptine. Ny neuroplasticity dia fahaizana atrehin'ny ati-doha amin'ny fanovana sy ny fanovana rehefa mianatra; ny fandraisana anjara amin'ny hatsaratsarana tsara sy ny fahaiza-mampianatra.
♦ Ny fandinihana ny marary 90 miaraka amin'ny PTSD dia nanaporofo ny vokatra tsara tamin'ny fampiasana ny monofiladin'ny Tianptina hemisulfate. Ny fianarana dia naneho ihany koa fa amin'ny fitsaboana amin'ny sulfat nytianptine sy ny fihenan-danja lehibe amin'ny fikorontanan'ny saina. Ny fiasan'ny hemiolytine Tianeptine nomena ny marary zokiolona dia nanatsara ny fitomboan'ny fanahiana sy ny fihetseham-po.
• Ny fanaovana firaisana ara-nofo sy ny olombelona dia notanterahana tamin'ny fitsaboana ny aretina Parkinson tamin'ny alalan'ny monohydrate hemisulfate Tianptine, izay mampiseho valim-pananana mahafa-po amin'ny fampivoarana ny marary ara-pahasalamana.
♦ Fanadihadiana mialoha momba ireo mpiara-miombon'antoka 68 amin'ny ADHD dia nanatsoaka fa mihatsara ny lanjany ary ny tombotsoam-pahasalamana ao Tianeptine dia manampy amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao tsara kokoa sy ny fihenan'ny fihetsika henjana.
• Ny hormone monoxide Tianeptine koa dia fanafody mahomby (aretina), na dia ho an'ny olona mijaly noho ny fanaintainan'ny aretina aza. Izany dia fomba mahomby hanamafisana ny soritr'aretina mifandray amin'ny olana ara-pahasalamana ao amin'ny tsinay.
Ny Ivon-toerana momba ny fitsaboana ara-panandramana any Caracas dia nitarika ny fizarana herinandro 52 isan-kerinandro momba ny zaza voan'ny angazomanga. Matetika ny marary no nitarika ny fampidiran-tsolika Tianeptine hemisulfate dia nampitombo be ny asan'ny lung.
♦ Na dia ilaina aza ny fikarohana, ny fandalinana ny 237 lehilahy miaraka amin'ny ED dia nanapa-kevitra fa ny tiantsin dia mety ho fitsaboana mahomby.
• Ny fiantraikan'ny tetibolan'ny Tianeptine dia tsy miteraka fiantraikany amin'ny acetylcholine na ny fihenan-tsakafo, ka mahatonga ny tianptine safidy tsara ho an'ny zokiolona sy ny hafa
Roahina Lorcaserin hydrochloride hemihydrate poids (856681-05-5)
Ny hydrochloride hemihydrate hydrochloride Rohde is a .......
fahafahana: 1280kg / volana